April 26, 2020 1309
आइतबार झापाका ५० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्र मण देखिएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल’यका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कोशी अस्पताल, विराटनगरमा भएको परीषक्षको नतिजा अनुसार झापा’का पुरुषमा कोरो’ना पोजि’टिभ देखिएको हो ।
सामान्य स्वास्थ्य अवस्था रहेका उनी अहिले अस्पताल’को निगरानीमा छन् । यसअघि झापा’को दमकका एक जनामा संक्रमण देखिएको थियो । उनको कोशी अस्पताल विराटनगर’मा उपचार भइराखेको छ ।
आइतबार झापामा एक जनामा कोरोना पुष्टि भए’सँगै संक्रमित’को संख्या ५२ पुगेको छ । १६ जना भने डिस्चार्ज भएका छन् ।पीसीआर विधिबाट ९ हजार ९ सय ३१ र आरडीटी ४१ हजार ४ सय ३६ जना गरेर ५१ हजारमा गरी अहिले’सम्म ५१ हजार तीन सय ६७ नमुना परीक्षण गर्दा भएका छन्।
पछिल्लो २४ घन्टामा दुई हजार ९६ जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो । आइतबार नै वीरगञ्जका दुईजनामा कोरोना देखिएको थियो ।वीरगन्ज महानगर वडा नम्बर २ र ३ का दुई पुरुषमा पीसी’आर परी’क्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिएको हो।
आजै वीरगन्जमा थप २ जनामा कोरोना भाइ’रस कोभिड–१९ पुष्टि भएको छ । वीरगन्ज महानगर वडा नम्बर २ र ३ का दुई पुरुषमा पीसीआर परीक्ष’णका क्रममा पोजि’टिभ देखिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिए। – अन्नपूर्ण पोस्ट
Prevरविको प्रश्न: चितवन घटनामा म विरुद्धको उजुरी काठमाण्डौमा लिन मिल्ने , सर्वेन्द्र खनालहरुको लिन नमिल्ने?
Nextवैशाख २५ गते’सम्म लकडाउन गर्ने सरकार’को निर्णय
आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नु`होस्